Haa, Tani runti waa sii waaraysaa! - Xarunta EcoTechnology
Haa, Tani runti waa sii waaraysaa!
View waaweyn Image
Maalin kasta waxaad qaadataa go'aanno saameeya cimilada. Mararka qaarkood, waxa saxda ah ee la sameeyo had iyo jeer ma aha kuwa ugu cad cad - joogtayntu waxay noqon kartaa mid ka hor tagta inta aad moodeyso Waxaan taxaynaa qaar ka mid ah fikradaha khaldan ee caamka ah iyo waxa laga yeelayo.
1. Haa, runti - isticmaal weelka weelka lagu dhaqo!
Mashiinka dharka lagu dhaqo ayaa aad uga waxtar badnaa sanadihii la soo dhaafay, waana ka waxtar badan yihiin saxamada gacmaha lagu dhaqo. Xaqiiqdii, weelka dhaqda ayaa isticmaali kara oo keliya Galbeed 16,300 biyo ah muddo 10-sano ah, halka gacmo-dhaqashada lagu isticmaalo agagaaraha Galbeed 34,200 biyo.
Tani marka hore waxay umuuqataa mid aan caqiido lahayn, laakiin weelka dhaqa ayaa dhab ahaan u isticmaala biyo aad uga waxtar badan gacmo-dhaqashada. Xaqiiqdii, celceliska, weelka cabbirka oo buuxa oo keliya ayaa adeegsada oo keliya 5 galaan oo biyo ah, ama ka yar, wareeg kasta.
Haddii aadan lahayn weel dhaqe, markaa habka ugu tamarta badan iyo sida ugu waxtarka badan ee biyaha lagu dhaqo waa in la xiro qasabadaada halkii aad u ogolaan lahayd inay socoto inta lagu jiro dhaqitaanka saxanka. Taabadalkeed, iskuday inaad buuxiso mid ka mid ah saxamada, dheriga tusaale ahaan, biyo diirran oo saabuun leh si aad ugu dhaqdo suxuunta kale, isticmaalna biyo qabow si aad u biyo raaciso.
line hoose: Isticmaal mashiinka dharka lagu dhaqo intii aad weel ku dhaqi lahayd gacanta. Sug sugida weelka dhaqa ilaa uu ka buuxo, laakiin iska hubi inaadan buuxin. Tani waxay hubin doontaa in saxan kasta uu nadiif ahaanayo iyadoo la hagaajinayo booska weelka lagu dhaqo.
2. Haa, runtii - mashiinka dharka lagu dhaqo qabooji!
Marka laga hadlayo alaabta la dhaqo, waxaa jira sheeko kale oo caan ah oo ah in biyo kulul oo keliya ay samayn karaan khiyaamada nadiifinta dharkaaga. Sidan xaalku maaha.
Dhab ahaan, 90% tamarta taas ayaa loo isticmaalaa marka dharkayaga la maydhayo ay kululaynayso biyaha. Ma aha in la xuso in biyaha kulul ay libdhi karaan ama / hoos u dhigi karaan dharka sidoo kale. Sababta ugu weyn ee dharka loogu dhaqo biyo kulul waa in la nadiifiyo dhar kasta si loo dilo wixii bakteeriya ama jeermis ah.
Haddii aad rabto inaad ku dhaqaaqdo masaafada dheer ee yareynta tamarta iyo dhaqaalaynta lacagta agagaarka dharka - isku day hawo qalajinta dharkaaga halkii aad ku tuuri lahayd qalajiyaha. Dhar qallajinta ayaa wax ka taraya 5.8% ee qiiqa CO2 ee la deggan yahay ee Maraykanka
Tani waxay sidoo kale ballaarin doontaa meertada nolosha dharkaaga, taas oo ay u badan tahay in mar hore la soo gaabiyey tayada awgeed moodada degdega ah. Markaa marka xigta waa maalinta dharka la dhaqdo, tixgeli inaad dharkaaga ku maydho biyo qabow si aad u badbaadiso tamarta una yaraato raadadka kaarboonkaaga!
Qadka hoose: Dharkaaga ku dhaq biyo qabow. Tani wali waxay nadiifisaa dharkaaga waxayna keydisaa tamar iyo lacag. Haddii aad u baahan tahay inaad fayodhiso dharkaaga ama dharka kale, markaa biyaha kulul ayaa ah habka loo maro.
3. Haa, runti - u wareeji koronto!
Korontada baabuurta, guryaha, tas-hiilaadka kale, iyo qalabka waxay noqon karaan mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu yareyn karo raadadka kaarboonka adduunka.
Si kastaba ha noqotee, sida cagaaran sida korontada u socota waa, runti ma ahan mid cagaaran sida aan u maleyneyno. Maanta, in ka badan 25% qiiqa gaaska lagu sii daayo adduunka oo dhan waxay ka yimaadaan wax soo saarka korontada. Maaddaama korantadeena ay ka dhashaan shidaal qashin halkii laga heli lahaa ilo dib loo cusboonaysiin karo, waxay macno samaynaysaa in wax soo saarka korontadu wax xoogaa ku kordhinayo kululaynta meeraha. Gali skoronto dhalinta.
Korantada istiraatiijiyadeed waa habka loo beddelo qalabka iyo nidaamyada kale si loo isticmaalo korontada, iyadoo sidoo kale la adeegsanayo tamar la cusboonaysiin karo halkii laga isticmaali lahaa shidaalka laga soo saaro soosaarka korantadan. Tani waxay gacan ka geysan kartaa kobcinta waxtarka tamarta iyo yareynta qiiqa.
line hoose: Korantada waa bilow wanaagsan, laakiin si dhab ah loo yareeyo raadadka kaarboonkaaga, korantada waa in lagu shaqeyaa iyadoo la cusbooneysiin karo halkii laga isticmaali lahaa shidaalka.
Haddii aad ku nooshahay Massachusetts, the Badbaadinta barnaamijka wuxuu bixiyaa lacag celin deeqsi ah si loogu casriyeeyo qalabka tamarta ku shaqeeya iyo kuleylka & nidaamka qaboojinta.
Haddii aad ka fekereyso inaad u cusbooneysiiso gaari koronto ah, Green Energy Consumers Alliance's Wad barnaamijka Green waa barnaamij qiimo dhimis ku sameeya korantada, taasoo ka dhigaysa gawaarida korontada mid ka jaban sidii hore. Saldhigyada lacag-bixinta ayaa sidoo kale si ballaadhan looga helayaa meelo badan maalin kasta, oo ay ku jiraan dukaamadeenna dib-u-isticmaalku, Gorgortanka EcoBuilding. Lacag sii gaarigaaga si bilaash ah marka xigta ee aad go'aansato inaad si shaqsi ah u dukaameysato, mid ka mid ah afartayada saldhig ee lacag lagu bixiyo!
4. Haa, runti - cimilada ayaa kuu diirineysa, laakiin sidoo kale waxay kaa dhigeysaa qabow!
Sida laga soo xigtay Waaxda Tamarta ee Mareykanka, qaboojiyeyaasha ayaa cunay ilaa 6% korantada la soo saaray gudaha Mareykanka. Taageerayaasha, dhanka kale, waxay isticmaalaan koronto aad uga yar tan AC, laakiin ha qaboojin heerkulka hawada. Marka, waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagu qaboojin karo iyadoo sidoo kale hoos loo dhigayo isticmaalka tamarta?
Si kasta oo ay AC wax u ool u tahay, ma awoodo inay qabato shaqada haddii hawo diiran gurigaaga soo gasho oo hawo qabow la waayo. Haddii gurigaagu uusan si sax ah hawada u xirneyn oo uusan daarneyn ama uusan laheyn hooska, heerkulka gudaha ayaa joogi doona hawo qabow ayaa soo bixi doonta.
Mid ka mid ah nidaamka qaboojinta hawada (iyo kuleylka) ugu waxtarka badan waxaa jira bamka kuleylka yar-yar. Mashiinka kuleylka wuxuu ku shaqeeyaa wareejinta tamarta halkii laga dhalin lahaa tamar. Sidoo kale ma isticmaalaan marinnada, taas oo ka dhigaysa gaadiidka tamarta waxtar badan. Kharashaadka hore waxay ka yara weynaan karaan bartamaha AC, laakiin keydka laga helo isticmaalka korontada ee hoose, oo ay weheliso dib u habeyn la heli karo, ayaa ka dhigaysa xulasho kharash-ku-ool ah.
Isticmaalka qalabka wax lagu karsado sida foornada iyo shooladda waxay kordhin kartaa heerkulka gudaha. Ka fogow socodsiinta kuwan inta lagu jiro bilaha diiran iyo saacadaha ugu kulul maalinta adoo adeegsanaya microwaving, adoo adeegsanaya qiyaasta soo-dhexgalka, ama yeelashada kuleyl wanaagsan oo duug ah!
Meelaha aan kulku kululayn bilaha kuleylka, taageere ayaa laga yaabaa inuu yahay waxa kaliya ee aad ugu baahan tahay inaad qaboojiso. Kaliya iska hubso inaad maamusho kaliya markaad qolka ku jirto!
line hoose: Daboolida hawada iyo dahaarka saxda ah ayaa lagama maarmaan u ah in laga ilaaliyo hawada diirran iyo hawo qabow. Haddii aad ku nooshahay Massachusetts oo aad xaq u leedahay, Badbaadinta ama Adeegyada Ka Hortagga Khasaaraha Tamarta Barnaamijyada (HELPS) waxay ku siin karaan qiimeyn xagga tamarta guriga ah oo aan qiimo lahayn. Qiimayntan tamarta guriga ah, waxaad ku heli kartaa qiimo dhimis ku saabsan dahaadhka gurigaaga.
CET waxay siisaa adeegyo latalin kuleyliyaha macaamiisha HELPS. Wac HELPS khadka tooska ah 1-888-333-7525 si aad waxbadan uga barato. Dadka uqalma Massachusetts waxay kaloo codsan karaan Xarunta Tamarta Nadiifinta Massachusetts Pilot-ka Heerkulka Heerkulka-Guriga oo Dhan barnaamijka.
Waxay kuxirantahay meesha aad ku nooshahay, taageere ayaa kugu filnaan kara. Si aad sifiican ugu qaboojiso guri leh taageere kaliya, iskuday inaad socodsiiso taageere guri oo dhan habeenkii si aad u qaboojiso guriga. Kadib subaxda, xir dhamaan dariishadaha iyo hooska si aad u ilaaliso hawo qabow. Adeegso marawaxadda si aad ugu wareejiso hawada qabow agagaarka maalintii.
Meelaha kuleylka leh, mararka qaarkood kaliya AC ayaa sameyn doonta khiyaanada. Fursadda ka raqiisan, ee waxtarka badan waxay noqon kartaa in la wado taageere iyadoo lala kaashanayo AC (iyo cimilada saxda ah ee dabcan).
5. Haa, runtii - dahaadhku wuxuu ka waxtar badan yahay bedelida daaqadahaaga!
Sida kor ku xusan, cimilada ayaa muhiim ah inta lagu jiro xilliyada kuleylka iyo qaboojinta labadaba. Guri sifiican u cimilan ayaa leh qulqulo hawo yar oo hawo qabow leh taas oo keeneysa qarash badan iyo keyd tamar. Laakiin sidee ayey muhiim ugu yihiin daaqadaha haynta hawo qabow / qabow gudaha?
Windows ayaa mas'uul ka ah 25-30% isticmaalka tamarta guryaha laga bilaabo kuleylka luminta iyo kuleylka kuleylka. Laba daaqadood oo muraayad ah ayaa waliba keeni kara 18-24% keydka daaqadaha hal-muraayad ah Si kastaba ha noqotee, uma baahnid inaad ku deg degto oo aad iibsato daaqado cusub oo tamarta tamarta leh si aad u keydiso tamarta iyo lacagta. Taabadalkeed, mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan ee qabowga ama kuleylka looga ilaalin karo gurigaaga waa iyada oo loo marayo cimilada.
Kicinta ku lug leh noocyo kala duwan oo ah farsamooyinka inaad hagaajiso bashqadda gurigaaga si aad uga dhigto mid wax ku ool ah kana ilaaliso walxaha dibedda ka yimaada. Tan waxaa ka mid noqon kara albaabada iyo daaqadaha qashin-ka-qaadista iyo cimilada-qaawinta, ku dahaadhidda waxyaabaha hawada ka daadanaya xumbada lagu buufiyo ama ku darista saqafka sare ama dahaadhka derbiga. Cimilada hawada ayaa ka dhigi karta gurigaaga mid aad u deggan, lacagna kuu keydin kara, isla markaana hagaajin kara tayada hawada gudaha. Haddii aad baahi u qabtid daaqado cusub, waxaan leenahay dhowr tamar oo ku habboon daaqadaha dib loo shubay dukaankayaga, Gorgortanka EcoBuilding!
Qadka hoose: Weatherize gurigaaga, oo ay ku jiraan qashin-qubka iyo ka-qaadista cimilada, halkii aad ka iibsan lahayd daaqado cusub. Tani waxay noqon kartaa mashruuc DIY ah ama uu ku sameeyo xirfadle iyada oo loo marayo mid ka mid ah barnaamijyada waxtarka tamarta deegaanka.
CET ayaa kaa caawin karta tan! Saxiix hada lacag la'aan Qiimeynta Tamarta Guriga si aad wax badan uga barato sida aad uga dhigi karto gurigaaga mid tamarta ku habboon.
6. Haa, runtii - kuleylka dami habeenkii!
Kuleylinta xisaabaadka guriga ee ku saabsan 45% ee biilka tamarta guriga. Ka hor heerkulbeegyada barnaamijka la socodsiin karo, dadka badankood waxay ku hoos jireen aragti ah in foornada ay sii shaqeyn doonto oo ay sare u qaadi doonto kharashyada si loo kululeeyo meel dib loo dhigo haddii kuleylka la demiyo. Fikirka ah in kuleylka guriga lagu sii daayo ay noqon laheyd mid tamar badan hubaal dhab ahaan ma keenin wax kharash ah oo keyd ah mana ka dhigayo foornada inay shaqeyso waqti dheeri ah. Deminta kuleylka habeenkii oo keliya maalintii maalintii ayaa dhab ahaantii ka tamar badan tamarta marka loo eego in lagu ilaaliyo 24/7.
Iyada oo leh heerkulbeegyo caqli-gal ah oo la adeegsan karo iyo Wi-Fi, waxaad hadda awood u leedahay inaad nidaamiso heerkulka gurigaaga adigoon lumin raaxada. Waxaad arki kartaa a 10% keydinta tamarta adoo si fudud dib ugu dhigaya heerkulka 7 ilaa 10 digrii 8 saacadood walina aad ugu soo kacaysid raaxo leh jadwal hore. Ka fikir inaad barnaamij u sameyso si aad hoos ugu dhigto heerkulka habeenkii ama markaad banaanka u baxdo maalintii si aad u gaarto keydkan.
line hoose: U isticmaal heer-kulmeed barnaamij ama smart ah si aad u jadwaliso kululaynta iyo qaboojinta ugu badnaan raaxo iyo keyd.
7. Haa, runtii - maahan wax kasta oo umuuqda in dib loo cusboonaysiin karo ka tirsanaanta dib u warshadaynta!
Dhamaanteen waan joognay: waxaa jira shay gacmaheena ku jira oo aan ka doodayno haddii aan dib u warshadeynayno ama aan ku tuurno qashinka. Waxaan dooneynaa inaan sameyno waxa ugu wanaagsan deegaanka, sidaa darteed waxaan ku ridanay qashinka dib loo warshadeeyo waxaana rajeyneynaa sida ugu fiican. Si kastaba ha noqotee, haddii sheygan uusan dhab ahaan ka tirsanayn qashinka dib loo isticmaalo, waxaan dambi ku noqon karnaa "rabitaanka doonista." Tan waxaa sida caadiga ah lagu sameeyaa ujeedooyin wanaagsan, laakiin dib-u-warshadaynta waxay u horseedaa wasakhaynta qulqulka dib-u-warshadaynta - heerarka faddaraynta dib-u-warshadayntu waa horeba kudhowaad 25%.
Haddii aan wax ku shubno qashinka dib-u-warshadaynta oo aysan meeshaas ka tirsanayn, waxay u badan tahay inuu ku dhammaado qashinka si kasta. Laga soo bilaabo markii sheygan la galiyay qashinka dib loo warshadeeyo, wuxuu aaday xarunta soo kabashada degmada (MRF), mashiinada / shaqaaluhuna waa inay kala soocaan waxyaalaha aan dib loo isticmaali karin ee ka baxsan waxyaabaha dib loo isticmaali karo. Waxyaabaha aan dib loo cusboonaysiin karin waxay ku dambeeyaan inay galaan qashinka halkii, meeshii ay ahayd in la dhigo meesha ugu horeysa. Wishcycling waxay qaadataa waqti iyo ilo si shey si haboon loogu tuuro mararka qaarkoodna xitaa wuxuu keenaa bac dhan oo dib loo isticmaali karo oo loo baahan yahay in lagu tago qashinka.
Wishcycling wuxuu kaloo horseedi karaa wax soo saar gaabis ah, wuxuu sababi karaa dhaawacyada shaqaalaha, iyo qalabka dib u warshadaynta macaanka. Bacaha balaastigga ah ayaa ka mid ah dembiilayaasha ugu xun, oo si isdaba joog ah ugu dhaca mashiinada, kana gaabiyo hawsha iyo waxyeelada qalabka, halka shaqaaluhu ay tahay inay joojiyaan kala soocida waxyaabaha dib loo cusbooneysiin karo iyo kala furfurida bacaha.
line hoose: Marka xigta ee aad qashinka dib u warshadaynayso shay aadan hubin, joogso oo ka fikir sida dhabta ah ee dib loo warshadeyn karo, iyo markii shaki ku jiro-tuur. Sharciga wanaagsan ee suulka waa hadii ay tahay warqad nadiif ah, kartoon, ama balaastikada oo ah jug, tubbo, iyo dhalooyin, markaa dib ayaa loo isticmaali karaa.
Hubso in dib-u-warshadayntaadu ay sidoo kale nadiif tahay, maxaa yeelay hadhaaga hadhay ayaa sidoo kale sumayn kara dib-u-warshadaynta. Haddii aad ku nooshahay Massachusetts, waxaad ka raadin kartaa shay kasta oo ka Dib u warshadeynta Smart MA bogga si loo arko haddii ay ka tirsan tahay dib-u-warshadaynta ama qashinka.
In kasta oo bacda balaastigga aan dib loogu isticmaali karin dib-u-warshadeynta dhinaca gees-ka-gees ah, weli waad dib-u-warshadayn kartaa tafaariiqlayaasha qaarkood. Soo hel goobaha daadinta dib-u-warshadaynta filimka caagga ah, ama ka hubi tafaariiqle maxalli ah.
8. Haa, runtii - mararka qaarkood, duulimaadku wuu ka fiicnaan karaa tareen qaadashada!
Wax qarsoodi ah maahan in duulimaadku wax xoogaa ku kordhinayo raadkeena kaarboonka. Si kastaba ha noqotee, nooca gaadiidka ee jawiga deegaanka u fiican ayaa ku kala duwanaan doona iyadoo ku xiran masaafada, nooca fadhiga, iyo tirada dadka safraya.
Sida laga soo xigtay Midowga Saynisyahanada Walaacsan, laba safar oo duulaya in ka badan 1000 mayl xagga dhaqaalahafurayaa faylka PDF way ka fiican tahay inaad tareen ku raacdo Mareykanka Si kastaba ha noqotee, haddii aad safreyso wax ka yar 1000 mayl ama aad duuleyso fasalka koowaad, markaa tareenku had iyo jeer wuu guuleysanayaa. Marka marka xigta ee aad rabto inaad ka soo duusho Mareykanka oo dhan hubi inaad ku safreyso dhaqaalaha! Sidoo kale, isku day inaad raadiso duulimaad aan joogsi lahayn maaddaama inta badan shidaalka diyaaradda la isticmaalo inta lagu jiro duullimaadka iyo degitaanka.
Safarka tareenka ee waddamada iskaga gudba ayaa uga sii xumaan kara deegaanka marka loo eego duulimaadka iyada oo inta badan tareenada Mareykanka ay wali ku shaqeeyaan naaftada. Tareenada ku yaal Wadada Waqooyi-bari waa tareenada kaliya ee Mareykanka ka shaqeeya ee ku shaqeeya korantada. Kuwaas oo kaliya sii deynaya qiyaastii 0.37 rodol oo CO ah2furayaa faylka PDF halkii kiilo mitir oo rakaab ah, halka tareenada shidaalka naaftada wata ay soo baxayaan 0.45 rodol oo CO ah2furayaa faylka PDF halkii rakaab-mayl.
Qadka hoose: Tareenadu waxay lahaan karaan raad kaarbooni ka weyn inta ay ku duulaan Mareykanka, gaar ahaan haddii aad safar dalxiis u kala baxeyso Sida ugu fiican ee lagu safro waxay noqon kartaa, dhab ahaan, baska baska mootada. Qof kasta oo sidan ku socdaala wuxuu yareeyn karaa raadkooda kaarboonka isagoo kudhowaad 85%. furayaa faylka PDF Kuwani waxay u muuqdaan inay yihiin xulashooyinka jaban marka la barbar dhigo qaadashada tareenka, in kastoo ay kordhin karaan waqtiga safarka.
9. Haa, runtii - hagaajinta halkii aad ka iibsan lahayd cusub ayaa sii waara!
Halkii aad ka iibsan laheyd alaab cusub markii alaabadaadii hore u baahan tahay in la beddelo, tixgeli inaad hagaajiso wixii aad horey u haysatay Marka laga eego xaga dhaqaalaha iyo deegaanka labadaba, hagaajinta waxyaabaha ayaa ah wadada loo maro. Waxyaabo badan dib looma cusbooneysiin sanadihii la soo dhaafay si ay u noqdaan kuwo tamarta si fiican u shaqeeya (sida rootigaaga ama dherigaaga kafeega ah), sidaa darteed beddelkooda wax saameyn ah kuma yeelan doono raadadkaaga kaarboon
Si kastaba ha noqotee, qalabka qaar sida mashiinka dharka lagu dhaqo ama mashiinnada dharka lagu dhaqo ayaa noqdey kuwo tamar badan oo waxtar leh sannadihii la soo dhaafay. Kordhinta qalabkan waxay kaa caawin kartaa inaad keydiso lacag iyo tamar, laakiin haddii midki hore uu wali ku jiro xaalad shaqo, waxaa ugu wanaagsan in si buuxda looga faa'iideysto ka hor inta aan la casriyeyn.
Tusaale kale ayaa ah ka beddelashada gaariga gaaska ku shaqeeya oo u beddelaya gaari koronto oo cusub. Haddii gaariga gaaska ku shaqeeya uu wali ku jiro xaalad wanaagsan, waxaa fiican inaad sii wadato wadida gaarigaan illaa aad diyaar u tahay casriyeyn. Markaad diyaar u tahay inaad cusboonaysiiso, tixgeli gaari koronto! Laakiin waqtigan la joogo, waxaa fiican inaad isticmaasho waxaad haysato oo aad u hagaajiso sida loogu baahan yahay.
line hoose: Hagaaji waxaad horey u haysatay. Markay tahay in la cusbooneysiiyo, tixgeli inaad u beddelato wax tamar badan isticmaalaya, laakiin isticmaal waxaad haysato ilaa waqtigaas.
10. Haa, runtii - haddii bacaha caagga ah ee hal-mar la isticmaali karo si aan dhammaad lahayn waxay ka sii waarayaan inta wadarta cudbi ka kooban!
Bacaha balaastigga ah ee hal mar la adeegsado ayaa loo arkaa dambi weyn. Laakiin sidee bay ugu xun yihiin deegaanka marka loo barbar dhigo bacaha kale ee wax lagu gado?
Boorsooyinka dib loo isticmaali karo ayaa laga yaabaa inay yihiin xulashada ugu macquulsan ee saddexda xulasho. Si kastaba ha noqotee, markaad tixgelinayso qiimeynta wareegga nolosha ee mid kasta iyo raadadka kaarboonka ee walxaha mid kasta laga sameeyay, waxay heli kartaa xoogaa ka sii adag. Qiimaynta wareegga nolosha waxay eegaysaa saameynta deegaanka ee heer kasta oo ka mid ah wareegga nolosha ee sheyga. Tani caadi ahaan waa soo saarista, soo saarista, baakadaha iyo gaadiidka, isticmaalka, iyo wejiyada dhamaadka nolosha.
Halkan waa halka ay ku adkaato. Bacaha balaastigga ah runti waxay leeyihiin a raad kaarboon hooseeya bilowga meertada noloshooda marka la barbar dhigo warqad ama bacaha wax lagu iibiyo ee dib loo isticmaali karo. Tan macnaheedu maahan inay iyagu yihiin kuwa ugu waara, maxaa yeelay markaad tixgelinayso meertada nolosha oo dhan, ma guuleysanayaan. Waxaa laga yaabaa inay haddii ay adeegsadaan marar badan, laakiin sida caadiga ah waxaa loo isticmaalaa hal mar oo keliya. Ma ahan kuwo la duudsiin karo oo wey isku dhegi karaan sanado badan, iyagoo sababaya arrimo kale oo la xiriira mikroplastics-ka iyo wasakheynta.
Dhanka kale, boorsooyinka waraaqaha waxay u muuqdaan inay leeyihiin raad yar oo kaarbooni ka yar bilowga meertada noloshooda. Boorsooyinka suufkuna way ka sii xun yihiin. Bac bac ah ayaa loo isticmaali lahaa ugu yaraan 3 jeerfurayaa faylka PDF , iyo suuf cudbi ah ayaa la isticmaali lahaa ugu yaraan 131 jeerfurayaa faylka PDF in loo sinnaado CO2 wax soo saar hal bac ah oo balaastig ah. Si kastaba ha noqotee, boorsooyinka waraaqaha ayaa si fudud u burbura marka loo eego caagga, iyo wadarta suufku waa adag yihiin sidaa darteed dib ayaa loo isticmaali karaa marar badan. Fursadahaan waxay sifiican ugufiirinayaan wajiga dhamaadka nolosha maadaama ay soosaaraan qashin yar. Runtii waxay ku timaaddaa inta jeer ee shay dib loo isticmaali karo iyo inta qof shaqsiyan dhab ahaan u isticmaalo shayga.
line hoose: Bacda ugu habboon deegaanka waxay noqon kartaa isku darka kuwan: dib u isticmaal bacda wax laga iibsado ee caagga ah ee dib loo isticmaali karo inta jeer ee aad kari karto. Bacahan culus ee balaastigga ah waa kuwo sii waara si aysan u dillaacin loona isticmaali karo marar badan. Wanaagsan, boorsada aad guriga ku haysato horey u isticmaal ama soo iibso hal gacan labaad! U adeegsiga bacaha marar badan intii suurtagal ah si loo yareeyo saameynta deegaanka!
Guud ahaan, waxay noqon kartaa khiyaano in lagu socdo waxa ay yihiin ficilada ugu waara. Maskaxda ku hay Afarta Rs: yaree, dib u isticmaal, dayactir, iyo dib u warshadeyn! Waad isticmaali kartaa oo aad dib u isticmaali kartaa wixii aad horey u haysatay, oo aad u hagaajin kartaa waxyaabaha sidii loogu baahdo. Isticmaal biyo yar oo kulul markii ay suurogal tahay, haddii aadan hubin in shay uu ku jiro qashinkaaga dib u isticmaal, hubi adeeggaaga qashinka / dib-u-warshadeynta ka hor intaadan ku tuurin qashinka. Ha ilaawin inaad cimilada ka dhigto gurigaaga si loo yareeyo kharashka tamarta loona kordhiyo raaxada!
By Ozette Ostrow|2021-05-20T16:46:29-04:00Waxaa laga yaabaa 20th, 2021|Karti Energy, Kaydinta tamarta, Cagaar cagaaran, Recycling, Sustainability, Uncategorized|
La wadaag Qoraalkan kuwa kale!
waxay ku furantahay daaqad cusubFacebook waxay ku furantahay daaqad cusubTwitterEmail
Waa maxay guuxa ka jira Korantada Istaraatiijiga ah?
Abriil 21st, 2022 | 0 Comments
Hadda waxaan ku karineynaa Magnets!
Hogaamiyaasha Madoow ee Waxtarka Tamarta
Christina Bicksler - Madaxa Hawlgallada
CET Waxay Ku Dhawaaqday Madaxweynaha Cusub, Ashley Muspratt: Sida Hogaamiye Cusub CET u Qorsheeyo inuu la kulmo Yoolalka Cimilada Hamiga leh
Iftiiminta Meheradaha Rhode Island ee La tacaalaya Xalka Cunnada Qashinka ah
Al Blake waxay kasbatay Xarunta Abaalmarinta Hogaaminta Deegaanka ee EcoTechnology
Fikradaha Hadiyada Jacaylka Waara ee Fudud!
Haddii ay dhacdo in aad wayday: Dib-u-Celinta Cimilada ee Webinar!
Khibrada EcoFellowship - Fatin Chowdhury
Waayo-aragnimadayda EcoFellow Ilaa hadda - Cassie Rogers